Ceydiid Ilka Xanaf oo loo gudbiyay Mooshin ka dhan ah Xasan Sheekh – Radio Daljir
Agoosto 17, 2015 7:24 b 0
Muqdisho, August 17 – Maxkamadda sare ee dalka ayaa la sheegay in loo gudbiyay mooshinka ka dhanka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay keeneen xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaailya.
Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac Xuseen oo ka mid ah mudanayaasha mooshinka ka gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa Warbaahinta u sheegay in mooshinkaan loo gudbiyay Maxkamadda Sare.
Sababta Maxkamadda loogu gudbiyay Mooshinkaan ayuu ku sheegay in Dastuurka dalka u yaalla uu qabo, in eedeyn sidaan oo kale ah hadii madaxweynaha loo jeediyo in maxkamadda Dastuuriga loo gudbiyo, hadii aysan jirinna ay loo gudbiyo Maxkamadda sare.
“Maadaama aysan jirin maxkamaddii Dastuuriga, waxaa Mooshinka loo gudiyay maxkamadda sare ee dalka, Dastuurka dalka u yaalla ayaa qaba, marka eedeymo sidaan oo kale ah loo soo jeediyo Madaxweynaha in maxkamadi ay soo cadeyso’ ayuu yiri Xildhibanka.
Dhinaca kale xildhibaanka ayaa sheegay in uljeedka ay mooshinkaan u gudbiyeen tahay sidii looga talin lahaa maslaxadda shacabka Soomaaliyeed, islamarkaana aanu jirin khilaaf horay uga dhaxeeyay madaxweynaha iyo xildhibaanada mooshinka keenay.
Waxa uu ku baaqay in aan qalqal shacabka lagu beerin, islamarkaana baarlamaanka uu shaqadiisa qabsanayo, lana xisaabtamayo madaxda qaranka.
Xildhibanno ka badan 90 ayaa dhawaan guddoonka baarlamaanka u gudbiyay mooshin ka dhan ah madaxweyne Xasan Sheekh, iyadoo guddoonkana uu maxkamadda sare u gudbiyay mooshinkaan.
(Dhagayso) Madaxweynaha Dawladda Puntland oo xariga ka jaray Waddooyin Laami ah oo Gaalkacyo laga sameeyay